Madaxweynaha Dawladda Puntland iyo weftigii uu hogaaminayey oo si-diiran loogu soo dhoweeyey Magaalada Kismaayo.[Masawiro]
October 8, 2017 - Written by Editor
Kismaayo:-Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo weftigii balaadhnaa ee uu hogaaminayey ayaa maanta gelinkii danbe 8 October 2017 si-diiran loogu soo dhoweeyey magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeel gaadh ka ah ee maamulka Jubbaland. Madaxweynaha iyo weftigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kusoo dhoweeyey Madaxweynaha Maamulkaasi Mudane Axmed Maxamed Islaan, Madaxweyne ku-xigeenadiisa, Guddoonka Baarlamaanka Jubbaland, masuuliyiin ka tirsan goleyaasha maamulkaasi, saraakiisha ciidanka Jubbaland, Isimo, Nabadoono, waxgarad iyo boqolaal shacabka magaalada Kismaayo.
Soodhoweyn kadin Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa si isku midda ugu mahadnaqay shacabka iyo Xukuumadda reer Jubbaland ee kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha magaalada Kismaanyo .
“Aad iyo aad ayaa waxaan ugu mahadnaqayaa shacabka iyo xukuumadda reer Jubbaland soo dhoweynta aadka u wanaagsan ehelnimada iyo Soomaalinimadu ku jirto, aad baanu runtii ugu qiiroonay soo dhoweyntiina maanta waana ku mahadsan-tihiin, waan ku faraxsanahay inaan imaado Kismaayo una imaado shirka wada tashiga maamul goboleedyada dalka oo ah shir looga hadlayo maslaxadda Soomaaliyeed” ayuu yiri Madaxweynaha Dawladda Puntland.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in ay maamul goboleedyadu xaq u leeyihiin inay isu yimaadaan sida dastuurku qabo katashadaan danahooda iyo masiirkooda, isla markaana ay wax iska waydiiyaan geedi socodka horumarka ummaadda Soomaaliyeed, maslaxadda dalka, xasiloonida, waddda shaqaynta maamullada dalka iyo dawladda dhexeba.
“Shirkani waa shir lagaga hadlayo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed ee aan lagaga hadlayn dhib kale iyo mu’aamaradtoona, in dawlad goboleedyadu isu yimaadan sida dastuurka ah ka tashadaan masiirka dalka, waxa ay leeyihiin, waxa ku waajib ka ah, xidhiihka ay leeyihiin iyaga iyo dawladddooda dhexe oo aanu rabno dhammaantayo u hurno una socono taaba gelinta geedi socod wanaagsan, nabadayn iyo horumarka Soomaaliyeed” ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaan ayaa dhankiisa sheegay in shirka Kismaayo yahay mid lagaga arrinsanayo maslaxadda guud ee dalka si aragti mid ah looga yeesho horumarinta dalka iyo isu soo dhowaanshaha ummadda Soomaaliyeed.
Ugu danbayn, Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa uga mahadnaqay Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan iyo xukuumaddiisa gogosha wadatashi ee ay u dhigeen maamullada dalka, waxaana uu xusay Madaxweynuhu in shirkani muddo lasoo dhirin-dhirinaayey qabsoomidiisa, isla markaana uu Madaxweynaha laftiisu waday illaa xiligii dawladdii hore ee uu Madaxweynaha ka ahaa Mudane. Xasan Shiikh Maxamuud isku imaatinka shir wadatashi oo lagu magcaabo (QUDHAC FORUM ), kaasi oo lagaga arrinsan lahaa hanaanka geedisocod ee dalka.
226,656 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress